Indlu yamaplanga encinci eHånesåsen. Atlanpeflya - I-Airbnb
Indlu yamaplanga encinci eHånesåsen. Atlanpeflya
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLars
Indlu yamaplanga encinci yanamhlanje eHånesåsen. Indlu yamaplanga ineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezimbini (iHare Kaen). Iphiko elinekhitshi elinento yonke (ioveni) kunye neTV. Iflethi inamagumbi okulala amabini aneebhedi ezikhweleneyo ezahlukeneyo, oko kukuthi zizonke iibhedi eziyi-4. Kukho igumbi lokuhlambela lalamaxesha, indlu yangasese kunye neshawa kunye nebhalkhoni ejonge ehlathini. Ukongezelela, kukho umatshini wokuhlamba nowokomisa i-umble.
Indlu yamaplanga ithe cwaka ekupheleni kweRøros kwindawo yamaplanga. Kukho indlela emfutshane eya esixekweni, kunye nehlathi kunye neentaba ngaphandle nje komnyango. Kungenjalo, jonga izimvo zeendwendwe esinazo.
Olunye undwendwe lubhale ehlotyeni ngo-2020 “Indlu yamaplanga entle netofotofo, enekhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela lalamaxesha, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. Indlu yamaplanga entle kakhulu kunye nezinto onokuzisebenzisa zale mihla. Ukuncokola kakuhle kakhulu nomasitande, nokubhalisa xa ufika nokuphuma okulula kakhulu nokubhetyebhetye ngebhokisi enesitshixo. Le ndlu isemaphandleni ibinayo yonke into esiyidingayo nangaphezulu, kwaye ibicocekile kwaye ifudumele. Uhlamba impahla yakho ngaphambi kokuba uhambe, ibe yonke into oyidingayo ikwindlu yamaplanga. Indawo isemgangathweni, kanye kumbindi weRøros. Konke kukuhlala kamnandi ibe ngokuqinisekileyo ndinokucebisa ukuba uhlale kule ndlu isemaphandleni!”
4.79 out of 5 stars from 335 reviews
4.79 · Izimvo eziyi-335
Indlu yamaplanga ingqongwe ziindlela zokutyibiliza ekhephini neendlela zokuhamba ukuba ufuna ukuhamba ezintabeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Lars
Thina siqeshisa ngendlu yamaplanga sihlala eTrondheim ngoko asiyi kubona nantoni na kuthi ngoxa ukwindawo ephezulu. Senza konke esinako ukuze sifumaneke ngefowuni nangeimeyile. Ukuze sigcine izinga lokuqeshisa liphantsi kangangoko kunokwenzeka, sikhethe ukucela abo babhatala indlu yamaplanga ukuba bazicoce ngokwabo ukuze kungafuneki sibhatale nabani na ukuze sicoce emva kokuphuma kondwendwe kuza kungena olunye. Oku kusebenze kakuhle kakhulu. Kodwa khumbula, kufana nokushiya indawo ifana nendlela ofuna ukuyifumana ngayo.
Thina siqeshisa ngendlu yamaplanga sihlala eTrondheim ngoko asiyi kubona nantoni na kuthi ngoxa ukwindawo ephezulu. Senza konke esinako ukuze sifumaneke ngefowuni nangeimeyile. Uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Røros